Monday May 27, 2019 - 13:30:50 in Wararka by Liibaan Jeexoow
Sannad kasta marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan wilaayaadka islaamiga ah ee Soomaaliya waxa ka dhaca tartamo dhanka Qur'aanka ah oo ku bilawda heer degmo kadibna heer wilaayo ugu dambayna waxa ku tartama dhammaan wilaayaadka, waxana kas
Sannad kasta marka la gaaro bisha barakeysan ee Ramadaan wilaayaadka islaamiga ah ee Soomaaliya waxa ka dhaca tartamo dhanka Qur'aanka ah oo ku bilawda heer degmo kadibna heer wilaayo ugu dambayna waxa ku tartama dhammaan wilaayaadka, waxana kasoo qeyb gala guud ahaan qeybaha bulshada.
Maalmihii aan soo dhaafnay masjidka Towxiid ee degmada Jilib ee xarunta Wilaayada Jubooyinka waxa ka soconayay tartan loogu magac daray Maahirul Quraan oo ay ka qeyb qaadanayeen tartamayaal ka kala socday dhamaan wilaayaadka Islaamiga ah, kuwaaso isugu jiray Macallimiin, nabadoonno ,ganacsato iyo bulsho kale iyagoona ku tartamayay 30ka Juz ee Quraanka kariimka.
Tartanka oo ahaa mid aad u adag, xiisana badan ayaa waxa isigu yimid rag maahiriin ku ah quraanka, waxana aad u adkayd in la kala saaro, dhibico aad u yar ayayna ku kala badiyeen. Kaalinta koowaad waxa galay macallin ka socday wilaayada Banaadir oo qaatay lacag dhan 3000 oo dolar, kutub iyo computer. sidoo kale kaalinta labaad waxa wada galay wiil ka socday Bay iyo Bakool iyo macallin Banaadir u tartamay.
Waxa xusid mudan in tartanka loo qabto caruurta dugsiyada iyo tartankani Maahirul qur’aan ay kala duwanyihiin, waxana la sugayaa tartankii caruurta durgsiyada, oo iyaguna ku tartami doona 30 juz, 20 juz iyo 10 Juz.
Hoos Ka Daawo Sawirada Furitaankii Tartanka Maahirul Qur'aan
Xildhibaan Ibbi "Diyaaradda ku burburtay Bardaale dhulka ayaa laga toogtay oo waa lasoo riday"